> Resource > Video > Sida loo Beddelaan FLV in DV
Haddii aad inta badan ku dhegto websites video qaybsiga qaar ka mid ah sida YouTube, laga yaabaa inaad hesho qaar ka mid ah lagala soo bixi videos FLV. Si ay iyaga ugu ciyaaro Windows ama Mac, waxaad isticmaali kartaa VLC ama Adobe Player si habsami leh u raaxayn. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad rabto in aad soo dhoofsadaan, kuwaas oo FLVs in Adobe jilitaankii Pro ama iMovie u tafatirka, aad u baahan tahay si loogu badalo videos FLV ah in ay qaab ay taageerayaan hore, guud ahaan MOV, FLV ama qaab DV.
Wixii sixiddiisa ujeeddada, qaabka DV waa la shaki ku jirin doorashada ugu fiican. Waa maxay DV wuxuu qaadanayaa waa intraframe riixo: loox kasta Tifaftirayaasha oo gebi ahaanba ku xiran tahay laftiisa on, iyada oo aanay jirin wixii xog ah ka horaysa ama ka dib loox. Sidas ayaa si sahlan saxar karo iyo sii tayo wanaagsan. Halkan waxaad ka heli doontaa xalka ugu sahlan ee FLV in ay diinta ka DV: waxa uu la soo shaqeeyay caawimo dadka ku takhasusay ah weli si sahlan loo isticmaalo Video Converter ---_ 1_698_1_ Video Converter u Mac . Halkan sida loo sameeyo.
Download Free version jirrabaadda kuwa aan FLV in DV Video Converter:
Fiiro gaar ah: barnaamijkan waa cross-madal, ie Video Converter for Windows (taageertaa Windows 8/7 / XP / Vista); Video Converter u Mac (taageertaa Mac OS X shabeel, Leopard Snow, libaaxa). Waxay wadaagaan feature la mid ah oo hoos ku hage qaadataa Screenshot Mac. Haddii aad isticmaalayso Windows OS, fadlan eeg User Guide in Windows .
1 Import FLV files si FLV ah dhibaataynta qoyska Converter
Waxaad si toos ah jiidi kartaa video ka fayl file aad u furmo suuqa barnaamijka; ama riix "File"> "Add Media Files" in bar Menu ay u doortaan faylasha aad rabto in aad si loogu badalo. Diinta Dufcaddii waxaa lagu taageeray, waxaad ku dari kartaa wax ka badan hal file ah si loo badbaadiyo waqtiga aad ku istareexdaan kuna diinta aad bay.
2 qaab saarka Set sida DV
Riix Qaabka icon hoose ee suuqa kala this ka dibna dooro "DV" ka "Video" ee liiska format.
Dhinaca kale, haddii aad rabto in aad wax ka bedel files FLV aad la iMovie, oo Final Cut Pro ka Apple Software, kaliya dooran presets ka " Faalladaada ", waxaa sida caadiga ah ka shaqeeya weyn oo heer sare ah socon.
Fiiro Gaar ah: Tani FLV in Converter DV ku siinayaa khalkhalgelinta buuxa si ay u sameeyaan goob ku haboon video iyo maqal ah labadaba, oo ay ku jiraan heerka yara, encoder, heerka jir, xallinta, iwm waxaad riixi kartaa qalabka ay doorasho "Settings" ka sokow qaab icon si ay u helaan meel ay furmo suuqa.
3 bilow si loogu badalo FLV in DV
Ka dib oo dhan dejinta hoos, ku dhacay "Beddelaan" button ka furmkidoona qaab beddelidda. Marka hawlaha oo dhan dhammeeyey, waxaad ka heli kartaa meesha files wax soo saarka ku badbaadnay riixaya badhanka "Output" ka.
Talooyin: Tani FLV in DV video Converter kale oo ay bixisaa hawl tafatirka awood badan. Haddii aad rabto in aad u astaysto video, riix "Edit" button ka hor inta qaab beddelidda, ka dibna aad xaalkaa video by falinjeeerka, lana siii, beddelo video saamayn, isagoo intaa ku daray watermark, iwm Waxaad ku baran kartaa info ka badan Guide User ee Mac
Flash Video (FLV) waa magaca qaab faylka loo isticmaalaa in lagu samatabbixin video internetka isticmaalaya Adobe Flash Player ah. Ayaa sii daayo dadweynaha ugu dambeeyay ee Flash Player taageertaa H.264 video iyo HE-AAC audio. Waxaa caadi ahaan loo isticmaalo oo ay ka mid yihiin websites YouTube, Google Video, Yahoo! Video, Reuters.com, metacafe, iyo qaar badan oo kale oo bixiya news. Flash Video waa arki on nidaamyada hawlgalka ugu, via cusub ee jira Adobe Flash Player iyo web browser fur-in, ama mid ka mid ah dhowr barnaamijyo dhinac saddexaad.
DV, soo gaabiyay ee Digital Video, waxay ka dhigan tahay camera digital, waxaa loola jeedaa macluumaadka video uu qoray warbixinta digital. Waxaa la bilaabay 1995 oo leh dadaal wadajir ah soo saarayaasha ee hormuudka ka ah camera video recorderslike Sony, Panasonic, JVC, Sharp, Toshiba iyo Canon iyo tiro ka mid ah si fiican u yaqaan qalabka guriga Rafaa. DV waa intraframe qorshe riixo video, taas oo uu isticmaalaa cosine u dhowreen beddesho (DCT) ku cadaadisaa video ku salaysan jir-by-jir. Audio waxa lagu kaydiyaa uncompressed. Maaddaama ay faa'iido riixo ay u tafatirka, dad badan oo isticmaala Mac iyo Windows door bidaan in xaalkaa videos guriga ku salaysan qaab DV video.
Sidee loo Diiwaan Voice on Computer aan Loss Tayada Your
Video Remaker: Si fudud ku taabo Up Exsiting Videos